कोरोना संक्रमण : सहरी क्षेत्र थप जोखिममा - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ साउन १४ गते ६:३०
काठमाडौं, १४ साउन । सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै सहरी क्षेत्र कोरोना भाइरस संक्रमणको थप जोखिममा परेको छ । भौतिक दुरी कायम कार्यान्वयनमा समस्या हुने र बाक्लो बस्तीका कारण सहरी क्षेत्र थप जोखिममा परेको हो ।
पछिल्लो केही दिनयता लक्षणसहितका संक्रमित देखिन थालेका छन् । श्वासप्रश्वासमा गाह्रो हुने, ज्वरो आउनेलगायतका लक्षण संक्रमितहरूमा देखिन थालेको छ । जसकारण जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै सतर्क रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेकै व्यक्ति आफैं सतर्क रहनु रहेको बताए । उनले भने, ‘भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ । कतै हिँड्दा मास्कको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । जोगिने उत्तम उपाय भनेकै आफू सजग रहनु हो ।’
पछिल्लो ११ दिनको अवधिमा नौ जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । गत ३ साउनसम्म संक्रमितमध्ये ४० जनाको मृत्यु भएकामा मंगलबारसम्म मृतकको संख्या ४९ पुगेको छ । देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार १ सय ३९ जना रहेको छ । हाल १५ हजार ३ सय ३१ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् । संक्रमितमध्ये हालसम्म १३ हजार ८ सय ७५ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
मंगलबार मात्रै १ सय २१ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । यस्तै, हालसम्म ३ लाख ५२ हजार ३ सय ७ जनाको पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ३२ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय ७६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौंमा ३ सय ३६, ललितपुरमा ९० र भक्तपुरमा ५० जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा ५३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
मंगलबार काठमाडौंमा ४८, ललितपुरमा ४ र भक्तपुरमा एक जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । केही दिनयता काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढेसँगै संक्रमितको संख्या बढेको हो । प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।